जान्नुहोस्, पति पत्नीबीचको उमेर कति वर्षले अन्तर हुँदा सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ ? - Internet Khabar
Home Jiwan Mantra जान्नुहोस्, पति पत्नीबीचको उमेर कति वर्षले अन्तर हुँदा सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ ?
काठमाडौँ । नेपाली समाजमा श्रीमान् भन्दा श्रीमतीको उमेर कम हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने गरेको पाइन्छ। सायद पितृसतात्मक सोंच-चिन्तनले पनि यसमा काम गरेको हुनुपर्छ।
युवतीहरु पनि आफुभन्दा बढी उमेरका पुरुषसँग दाम्पत्य जीवन विताउने अभिलाषा प्रकट गर्छन्। उनीहरु प्रेम गर्दा होस् वा विवाह गर्दा, आफुभन्दा बढी उमेरका पुरुषसँग गर्न चाहन्छन्। गरिरहेका हुन्छन् पनि।
किनभने अक्सर युवतीहरु पुरुषबाट सुरक्षा खोज्छन्। उनीहरु आफ्नो जीवनसाथी आफूभन्दा परिपक्क होस् भन्ने चाहन्छन्। त्यसैले उनीहरु आफुभन्दा बढी उमेरका पुरुषसँग सम्बन्ध गाँस्न रुचाउँछन्।
सायदै होलान्, श्रीमान् र श्रीमतीको उमेर बराबर भएको। धेरैजसो श्रीमतीको भन्दा श्रीमानकै उमेर बढी हुन्छ। तर, कति बढी ? यसको पनि कुनै सीमा छैन। कोही श्रीमान्-श्रीमती १ बर्षका जेठो कान्छो हुनसक्छन्।
कतिमा भने १० वा ११ बर्षको उमेर अन्तर हुनेगर्छ। दम्पतीबीच जति धेरै उमेर अन्तर हुन्छ उत्तिनै उनीहरुको सम्बन्धमा खटपट आउने र सम्बन्ध विच्छेद हुने संभावना बढ्छ।
यस किसिमको उमेर अन्तरले दाम्पत्य सुखमा केही असर गर्छः
किनभने विवाह एक यस्तो सम्बन्ध हो, जसमा श्रीमान् र श्रीमतीबीच खास तालमेल हुन जरुरी छ। नभए त प्रेमले जोडिएको यो सम्बन्धमा खटपट आउन सक्छ।
जर्जिया एटलान्टाको एमोरी युनिभर्सिटीको अध्ययनकर्ताले यसै सम्बन्धमा एक अध्ययन गरेको थियो। त्यसमा तीन हजार दम्पतीले भाग लिएका थिए।
उक्त अध्ययनको ध्येय थियो कि, के कारण दाम्पत्य जीवन लामो समयसम्म सुमधुर रहनछ । अध्ययनका क्रममा उमेर, जाति, पढाई, रोजगार, धर्म, आय, परिवारमा सदस्य संख्याको जानकारी लिइयो।
यस किसिमको डाटाबाट अध्ययनलाई भरपर्दो बनाउनका लागि रिलेशनसिप र प्रेमको दृष्टिबाट निष्कर्ष निकाल्न सहज भयो।
यो अध्ययन केवल यही कुरा पत्ता लगाउनका लािग गरिएको थियो कि के वास्तवमा सफल र लामो सम्बन्धका लागि पार्टनरबीचको एज ग्यापले कुनै अर्थ राख्छ ?
यस स्टडीमा हासिल गरिएको जानकारीलाई तीन हिस्सामा विभाजन गरिएको थियो। पहिले, ति दम्पती जसको उमेर अन्तर एक बर्षभन्दा कम छ। यसरी उमेर अन्तर धेरै नहुनेको दाम्पत्य जीवन सुखमय हुन्छ। उनीहरुमा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने संभावना अत्यन्तै कम हुन्छ।
यसैगरी जुन दम्पतीको उमेर अन्तर पाँच बर्षको छ, उनीहरुको ब्रेकअप हुने संभावना १८ प्रतिशत रहन्छ। त्यसैगरी जुन दम्पतीको उमेर अन्तर १२ बर्षभन्दा बढी छ, उनीहरुको सम्बन्ध विच्छेद हुने सम्भावना अधिक रहन्छ।
यसको निष्कर्ष के भने, दम्पतीबीच जति धेरै उमेर अन्तर हुन्छ उत्तिनै उनीहरुको सम्बन्धमा खटपट आउने र सम्बन्ध विच्छेद हुने संभावना बढ्छ। यसर्थ दाम्पत्य सुखका लागि श्रीमान् र श्रीमतीको उमेर अन्तर पनि कम हुनुपर्छ।
Previous articleघामले डढेको छालालाई १ हप्तामै गोरो बनाउन चाहनुहुन्छ ? यसरी प्रयोग गर्नुहोस् कालो चिया
Next articleकाठमाडौंका १० ठाउँमा विपन्नलाई सस्तोमा खाना खुवाउने सरकारको घोषणा